काठमाडौँ । चौथो नेपाल अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) आजदेखि शुरु भएको छ ।
नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको आयोजनामा नेपाली चलचित्र र चलचित्रकर्मीलाई विश्वका चलचित्र र चलचित्रकर्मीमाझ परिचित गराउने तथा चलचित्रमार्फत नेपाली कला, संस्कृति र पर्यटनलाई विश्वभरि फैलाउने उद्देश्यका साथ महोत्सव शुरु गरिएको हो ।
महोत्सवको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले महोत्सवले नेपाली चलचित्रका माध्यमबाट नेपाली कला, संस्कृति र पर्यटनलाई विश्वसामु प्रचार गर्ने बताए । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले महोत्सवले विभिन्न देशबीच आत्मीय सम्बन्ध राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
पोर्चुगलका चलचित्र निर्देशक ज्वाओ पाउलो म्याकेज्डोले महोत्सवमा सहभागी नेपाली चलचित्रबाट नेपाली कथा र विषयवस्तु बुझ्न पाइने बताए । चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेले महोत्सवले समग्र चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग पु-याउने बताए । महोत्सवमा भारतीय अभिनेता अनुराग कश्यपले आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । उनले नेपालका मनोरम दृश्य र नेपाली कथा समेटिएको चलचित्रलाई विश्वबजारले समेत उत्साहका साथ हेरिरहेको बताए ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केपी पाठकले नेपाल सहित ३१ देशका ६५ वृत्तचित्र र छोटा चलचित्र महोत्सवमा सहभागी रहेको जानकारी दिए । नेपालका तर्फबाट आठ छोटा चलचित्र समाविष्ट छन् । महोत्सव यही वैशाख २७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । कोरोना भाइरसका कारण यसपटक महोत्सवलाई भर्चुअल रुपमा सञ्चालन गरिएको छ ।
एकैपटक ५२ एसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ? [नामावलीसहित] ६ मिनेट पहिले
नेपाल प्रहरीका ५७ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ? ११ मिनेट पहिले
सरकारले भन्यो - १८ गतेपछि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने संक्रमितको खर्च व्यहोर्दैनौँ २६ मिनेट पहिले